रंगीन खबर – Page6– SamajKhabar.com
फष्टलुकमा यस्तो देखियो ‘डमरुको डण्डीबियो’
काठमाडौं । अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने अभिनित नयाँ चलचित्र ‘डमरुको डण्डीबियो’को फस्टलुक अर्थात पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शन मिति फाइनल हुसन बाँकी यो चलचित्रको पोष्टरमा खगेन्द्रलाई डण्डीबियो खेल्दै गरेको देख्न सकिन्छ । लोप हुँदै गएको नेपाली खेल डण्डीबियोको कथालाई बिषय बनाएको चलचित्रमा....पुरा पढ्नुहोस
राधाकृष्णको निर्देशनमा राजेशपायलको नयाँ गित (भिडियोसहित)
काठमाडौं । अभिनय र निर्देशन यात्रालाई एकैसाथ अघि बढाइरहेका राधाकृष्ण आचार्यको निर्देशनमा नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । चर्चित गायक राजेश पायल राईको स्वरमा रहेको ‘तिमिलाई नसम्झिने त’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियोले दर्शकहरुको मन जित्ने क्रम जारी छ । कुलेखानी र आसपासका क्षेत्रमा छायांकन....पुरा पढ्नुहोस
सलमानलाई नेपालमा २ हजार सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिने !
काठमाडौं । बलिउड सुपर स्टार सलमान खान नेपाल आउने निश्चित भएको छ । फागुन २६ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा हुने कार्यक्रममा सलमानसँगै बलिउडका अन्य कलाकारहरु पनि आयोजक ओडीसी इन्टरटेनमेन्टले जनाएको छ । सलमान जेट एयरलाइन्सको विमानबाट २५ गते काठमाडौं आइपुग्नेछन् । ७ जना कलाकारका साथमा ९० जनाको टोली होटल....पुरा पढ्नुहोस
श्रीकृष्णकी श्वेतालाई बिहेको दवाव !
काठमाडौं । नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह गरे लगत्तै एकल महिला बन्न पुगेकी नायिका श्वेता खड्का विवाह बन्धनमा बाँधिने मनस्थितीमा पुगेकी छिन् । घर परिवार र साथीभाइबाट विवाहका लागि दबाब आएपछि खड्का विवाह गर्ने सोचमा पुगेकी हुन् नायिका खड्काले निर्माण गरेको चलचित्र ‘कान्छी’ आउँदो फागुन ४ गते....पुरा पढ्नुहोस
माननीय कोमल वली ! पोइल कहिले जाने ?
काठमाडौं । पोइल जान पाम शीर्षकको गीतबाट गायिका कोमल वलीले जति चर्चा कमाइन् त्यति नै विवाद पनि । तर कोमल वली नेपालको कला क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण नक्षत्र रहेकोमा दुविधा छैन । राष्ट्रियसभा सांसदमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी कोमल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकी छिन् । अब माननीय कोमल वली बनेकी उनले आफ्नो....पुरा पढ्नुहोस
मकाउमा प्रदर्शन हुँदैछ ब्लाइण्ड रक्स
मकाउ । डाक्टरको सामान्य लापरबाहीका कारण आँखाको ज्योती गुमाएकी नेपाली चेली सृष्टि केसीको जीवनमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको नेपाली चलचित्र ब्लाईण्ड रक्स”(BLIND ROCKS )यही फेब्रुअरी २३ तारीखका दिन साँझ ६:०० बजे सन्मालो स्थित काम्पेक कम्युनिटी हलमा नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउको आयोजनामा प्रदर्शनी गरिने....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेलामा लोकदोहोरी गायिका ज्योति मगरलाई निषेध गर्ने भएको छ। लेखनाथको डाँडाको नाकमा माघ ११ गतेदेखि २२ गते सम्म हुने १४ औं संस्करणको महोत्सवको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले ज्योति मगरलाई निषेध गरेको बताएका....पुरा पढ्नुहोस
सबैलाई हसाउने मनोज गजुरेलले जब रुँदै गरे डिभोर्समा हस्ताक्षर
२२ वर्ष लामो बैवाहिक जीवनको अन्त्य गर्दै चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेल र फेसन डिजाइनर मीना ढकालले पारपाचुके गरेका छन् । उनीहरुका २० वर्षका एक छोरा र १३ वर्षकी छोरी छन् । कसैको विवाह वा सम्बन्धविच्छेद नितान्त व्यक्तिगत मामिला हुँदाहुँदै पनि यो जोडीको सम्बन्धविच्छेदबारे नेपाली मिडियाले अलि बढी....पुरा पढ्नुहोस
गायिका कोमल ओली बन्ने भइन् एमाले सांसद
काठमाडौं । नेकपा एमालेले चर्चित लोकगायिका कोमल वलीसहित १३ जनालाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ का १३ उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको हो । जसअनुसार प्रदेश नम्बर ५ बाट कोमल वली (महिला), दाङसहित....पुरा पढ्नुहोस
गाना बजाइदेउ भन्दै ऋषि धमलाकी पत्नी नाँच्न थालेपछि (भिडियो)
काठमाडौं । पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी हुन् एलिजा गौतम । अब उनको पहिचान फेरिएको छ । चलचित्र निर्मात्री र नायिकाका रुपमा उनी नेपाली रजतपटमा प्रवेश गर्दैछिन् । चलचित्र अनुरागमा उनले नाचेको कान्छादाई गाना बजाइदेउन शीर्षकको गीतको सुटिङ क्लिप अहिले युट्युवमा चर्चामा रहेको छ....पुरा पढ्नुहोस